Samsung fan လို့ဆိုတဲ့ အေးမြတ်သူနဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း – DigitalTimes
Digital Times ရဲ့ ကဏ္ဍအသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံးခြင်း ကဏ္ဍအတွက် နိုင်ငံကျော်သရုပ်ဆောင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အေးမြတ်သူရဲ့ shooting ရိုက်ကွင်းကိုသွားရောက်ကာ လက်တလောအနုပညာလှုပ်ရှားမှုနဲ့ သူကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ နည်းပညာ ပစ္စည်းတွေအကြောင်းကိုမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Q. လက်တလောအနုပညာ လှုပ်ရှားမှုလေးကို ပြောပြပေးပါလား။
မနေ့ကဖြစ်သည် ဆိုတဲ့ MRTV4ဇာတ်လမ်းတွဲလေးရိုက်နေတာပါ။ ဒီဇာတ်လမ်းလေးကအရမ်း စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ စိတ် သံသယလေးတွေနဲ့ ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဖြစ်မလဲ ဆိုတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ ရဲဇာတ်လမ်းတွဲလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်တွေ မြင်နေကျထဲက ခွဲထွက်မယ်ဇာတ်လမ်းတွဲ လေးဖြစ်တယ်။ စိတ်ပူတာတစ်ခုက အဲဒီအသစ်အဆန်းကို ပရိတ်သတ် လက်ခံနိုင်ပါ့မလား ဆိုတာပါပဲ။ ဒါပြီးရင်တော့ ရုပ်ရှင်ကားတွေ ဗီဒီယိုတွေဆက်ရိုက် သွားဖို့ရှိပါတယ်။
Q. လက်တလော အေးမြတ်သူ ဘယ်ဖုန်းတွေကိုင်လဲ။
A. လက်ရှိ Samsung S7 edge ကိုင်ထားပါတယ်။ အေးမြတ်သူက samsung fan ပါ။ တောက်လျှောက်အေးမြတ်သူ Samsung ပဲကိုင်တာပါ။ iph ကို မသုံးတတ်ဘူး။ နည်းပညာပိုင်း သိပ်မကျွမ်းလို့ပါ။ အေးမြတ်သူရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ iPhone သုံးတာများတော့ iPhone သုံးကြည့်ချင်တယ် ဈေးများတော့ ဝယ်ရမှာနှမြှောတာ နဲ့ မဝယ်ဖြစ်ဘူး။ ဟိုတလောက ဧရာဝတီဘဏ်ကနေ အရစ်ကျနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ ဝယ်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ တစ်လုံးတစ်ခဲကြီးပေးဝယ်တာထက် အရစ်ကျလေးဆိုတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်။
Q. ဖုန်းကို အေးမြတ်သူ အနေနဲ့ တစ်နေ့တာအတွက် ဘယ်လိုအသုံးပြုဖြစ်လဲ။
ဖုန်း ကို အရေးကြီးတဲ့ contacts မှတ်တယ်။ social network အတွက်သုံးတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်။ဖုန်းပြောတယ်။
Q.Samsung S7 edge ကိုင်ထားရတာရော အဆင်ပြေလား သူ့ရဲ့အားသာချက်တွေကို ပြောပြပေးပါလား။
အေးမြတ်သူနဲ့ Samsung က use to ဖြစ်နေတော့ သုံးရတာအဆင်ပြေတယ်။ ရေအောက်ထဲမှာရိုက်လိုလဲရတယ်။ကင်မရာလည်းကြိုက်တယ်။
Q. အေးမြတ်သူ အမြဲယူသွားဖြစ်တဲ့ IT ပစ္စည်းတွေကိုပြောပြပေးပါလား။
ထွက်ရှိပြီးသမျှ အကောင်းဆုံး Wireless Headphone များ
Password ခံထားတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေကို စက္ကန့်(၃၀)အတွင်း hack နိုင်တဲ့ ကိရိယာ